April 2011 ~ Nyi Nay Min (Reshare IT knowledge)
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com. Friday, April 29, 2011
HDD ထဲက D တစ်ပိုင်းပျောက်နေလို့
kaungchanmyae972@gmail.com : မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ ကိုညီ နှစ်သစ်ကူးမှာ အရှုပ်ပေးတယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့ အကိုညီ ကျနော့် စက်မှာ drive D မပေါ်တော့လို့ ဘာဖြစ်တာလဲအကို... အရင်က window7enterprise တင်ထားတာပါ ။ အဲဒီတုန်းက drive C ကဖွင့်လို့မရဘူး ။ အဲဒါနဲ့ window7Ultimate ပြောင်းတင်လိုက်တာ.။ လမ်းညွှန်အတိုင်း ဘဲလုပ်ပါတယ်။ window loader run လိုက်ပီးရင်တော့ခဏလေးပေါ်လာတယ်။ ပီးတော့ပြန်ပျောက်သွားတယ်။ ကွန်ပျူတာကို right click လုပ်ပီးတော့ manage ထဲကနေ disk management ကိုဖွင့်ကြည့်ရင်တော့ drive ကရှိနေပါတယ်.။ အဲဒါ ကွန်ပျူတာထဲမှာ drive D ပေါ်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အကို....။ကျွန်တော်လဲ တစ်ခါဖြစ်ဖူးပါတယ် . အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို ရေးပေးလိုက်ပါတယ် . ဓါတ်ပုံနဲ့တော့ မပြတော့ပါဘူး . အခုပြောပြတာကို နားမရှင်းသူများ ပြောပါ ဓါတ်ပုံနှင့်ပြန်တင်ပေးပါမည်။my computer ကို right click ထောက်ပြီးတော့ manage ထဲကို ၀င်လိုက်ပါ .ပြီးရင်တော့ Storage ရဲ့ အောက်က Disk Management ကို နှိပ်လိုက်ပါ ..ပျောက်နေတဲ့ Drive ပေါ်ကို right click ထောက်ပြီးတော့ change Drive latter and paths ကို နှိပ်လိုက်ပါ . ပြီးရင်ပေါ်လာတဲ့ box ထဲကနေ Change ကို နှိပ်လိုက်ပါ . အဲ့ထဲက C နှင့် D မဟုတ်တဲ့ တစ်ခြား drive latter ကို ရွေးပြီးတော့ OK ပေးလိုက်ပါ . ပျောက်နေတဲ့ Drive ပေါ်လာတာကို မြင်တွေ့ရမှာပါ . အားလုံးပဲ အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် .
japgdogg.gangsta@gmail.com : အစ်ကိုညီနေမင်းကို အကူအညီလေး တစ်ခု တောင်းချင်လို့ပါ။ Usb Safeguard ဆိုတဲ့ Usb device တွေကို Lock ချတဲ့ software ရှိတယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီsoftware က 2GB pendrive ဆိုရင် free . 2GB နဲ့အထက်ဆိုရင် အခကြေးငွေပေးရတယ်။ အခကြေးငွေပေးပြီးဝယ်ချင်ပေမယ့်လည်း အခကြေးငွေရှိတောင် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ Credict card စနစ်မရှိတော့အဆင်မပြဘူးဖြစ်နေတယ်။ Software လေးကတော့တော်တော် portable ဖြစ်တယ်။အဆင်လည်းပြေတယ်။ဒါပေမယ့် . 4GB pen drive တွေအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေလို့ crack, keygen လေးများရှိလျင် ကျေးဇူးပြု၍ share ပေးစေလိုပါတယ်။
အောက်မှာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် .
myozintun888@gmail.comးko nyi nay min, pleased give meafull version keys of ashampoo internet accelerator3...I really need to use this softwares..pleased help me bro...အောက်မှာ ယူလိုက်ပါ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .Download mediafire
myocafe@gmail.comးကိုညီ ခင်ဗျား။ ကျွန်တော့် ကို hp pavilion tx1000 အတွက် window7driver တင်ပေးပါလားခင်ဗျာ။ internet မှာ ရှာလို့ မတတ်လို့ ပါ။ကျွန်တော် လိုက်ရှာတာ xp , 2000, vista ပဲ တွေ့ပါတယ် . window7အတွက် မတွေ့ပါဘူး သူ့မူရင်း link ကို သွားကြည့်လိုက်ပါ GRAPHIC:series6Nvidia grahics driver:Download or tryDownloadAUDIO:Realtek High Definition AudioDownloadWIRELESS:Broadcom Wireless LAN DriverDownloadBLUETOOTHHP Integrated Module with Bluetooth Wireless TechnologyDownloadHP Wireless Assitant:DownloadFINGERPRINT:AuthenTec AES1610 Fingerprint DriverDownloadMODEM:Motorola SM56 Data Fax Modem, download from V6700TXDownloadWEBCAMHP 1.3 MegaPixel (MP) Webcam Software DriversDownloadHP Pavilion Webcam DriverDownloadCARD RICOH:Ricoh 5-in-1 Card Reader DriverDownloadLightScribe Host SoftwareDownloadHP Battery CheckDownloadTouchscreen SoftwareDownloadHP TouchpadDownloadHP QuicklaunchDownload
myozintun888@gmail.com : Hi, ko nyi nay min, pleased give measerial key for uniblue registry booster2011..if u haveatime..i havealot of error..
chrome.exe ကို သတ်လို့မရလို့
heinmaungmg@gmail.com : အဲဒါဘယ်လို ဖြေရှင်းရမလဲ အစ်ကို အကုန် ပျံ့နေတယ် စက်ထဲမှာ်format လည်းမချချင်ဘူးအစ်ကို safe mode လည်းမတတ်ဘူး ဖြစ်နေတယ် anti-virus လည်း မrun ဘူး ဖြစ်နေတယ် ဘယ်လို ဆို data မပျက်ဘဲ ဖြေရှင်းနိုင်မလဲ . ကူညီပါဦး ...ကျွန်တော်တော့ chrome virus မရှိတဲ့အတွက် သတ်နည်းကို အတိအကျ ရေးပေးဖို့ လိုအပ်သွားပါတယ် . ရှာလို့ရတဲ့ pdf စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ကိုတော့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . အဲ့ထဲမှာတော့ အပြည့်အစုံရေးပေးထားတာတွေ့ရပါတယ် . ရေးတဲ့သူကတော့ ပြည့်စုံလို့ပါပါတယ် . ဘယ်ကလဲတော့ မသိပါဘူး . ပို့စ်တစ်ပုဒ်တက်ဖို့ ဓါတ်ပုံတွေတင်ရ ဘာတင်ရနဲ့ဆိုတော့ မလွယ်လို့ သူတင်ပေးတဲ့ စာအုပ်လေးကိုပဲ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . အဆင်ပြေလို့ ကျေးဇူးတင်ချင်ရင် အဲ့ဒီ့သူကိုသာ ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ ..Download ifile.it | Download mediafire | Download ziddu | Download zshare